Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » 2022 Tanàna malala-tanana indrindra any Etazonia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Tsy ny ekipa baseball irery no olona masina ao amin'ny Twin Cities. Ny Minneapolis sy St. Paul, Minnesota, dia tena ahitana ny dikan’ny hoe “mpiara-monina”.
Rehefa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fanomezana isika - misaotra sy manampy ireo sahirana - maro amintsika no miasa sy mahazo vola bebe kokoa, fa ny areti-mifindra dia manohy manasarotra ny fiainana ho an'ny Amerikana an-tapitrisany.
Raha ny marina, dia “olon-dehibe efa ho 20 tapitrisa no mipetraka ao amin’ny tokantrano tsy ampy sakafo” ary “mpanofa olon-dehibe 12 tapitrisa no ao ambadiky ny hofan-trano”, araka ny voalazan’ny Foibe momba ny Tetibola sy ny Laharam-pahamehana ara-politika.
Soa ihany fa Amerikanina maro no miroso amin'ny fanampiana ireo sahirana.
Fa inona ireo tanàna malala-tanana indrindra amin'ny taona 2022?
Ny mpandinika dia nampitaha ny 130 amin'ireo tanàna lehibe indrindra any Etazonia manerana ireo mari-pamantarana fototra 13 amin'ny fitondran-tena mpanao asa soa, manomboka amin'ny fanomezana asa soa ka hatramin'ny tahan'ny asa an-tsitrapo ka hatramin'ny isan'ny banky sakafo - eny fa na dia ny isan'ny olona niova fo aza. Tranomboky maimaim-poana kely ao anaty boaty fifampizarana sakafo ho an'ny mpiara-monina noana.
Jereo ny tanàna 20 tonga any amin'ny lalina indrindra ao am-pony sy ny paosiny etsy ambany.
Tanàna malala-tanana indrindra amin'ny taona 2022
15 Cincinnati, NY
Ny kambana tsy misy fitiavan-tena indrindra (The Most Selfless Twins): Tsy ny ekipa baseball irery no olona masina ao amin'ny Twin Cities. Ny Minneapolis sy St. Paul, Minnesota, dia tena ahitana ny dikan’ny hoe “mpiara-monina”. Nitana ny laharana voalohany i Minneapolis na tamin’ny ankapobeny na teo amin’ny sokajy Fahalalahan-tanana isam-batan’olona, ​​raha tsy lavitra teo amin’ny laharana fahafito kosa i St. Paul.
Tsy ny mponina ao amin'ireo tanàna ireo ihany no manome ny fotoanany indrindra (samy laharana 1 amin'ny tahan'ny asa an-tsitrapo), fa manome antoka koa izy ireo hanome sakafo mafana ho an'ny vondrom-piarahamonina noana. Minneapolis dia laharana faha-6 sy St. Paul No. 8 amin'ny lakozia lasopy. Nametraka laharana faha-3 sy laharana faha-13 ihany koa izy ireo, tamin'ny fizarana toerana misy boaty izay napetraky ny mponina ho an'ny mpiara-monina tsy azo antoka ara-tsakafo mandritra ny areti-mifindra.
Nanana andro nahafinaritra i Mr Rogers tao amin'ireo faritra ireo.
Tanàna lehibe kokoa, mila lehibe kokoa:
Ny tanàna lehibe kokoa amin'ny ankapobeny dia nahavita tsara kokoa tamin'ny filaharana noho ny tanàna kely sy antonony.
Izany dia satria ny tanàn-dehibe dia mirona hifantoka amin'ny fampitomboana ny fiantraikan'izy ireo iraisan'izy ireo mihoatra noho ny fandraisany anjara tsirairay. Raha ny marina, tanàna telo lehibe indrindra any Amerika, New York, Chicago, ary Los Angeles tamin'io filaharana io, no nibahan-toerana tamin'ny metrik'ny Fahalalahan'ny vondrom-piarahamoninay. Houston, San Francisco, ary Washington, DC, dia tafiditra ao amin'ny 10 ambony amin'ity sokajy ity ihany koa.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny tsy fitoviana ara-toekarena, ireo tanàn-dehibe ireo dia mampiseho fa ny fahalalahan-tanana dia mihamitombo any amin'ny toerana ilana azy indrindra.
Florida Falls amin'ny sisin-dalana:
Nandefa tanàna efatra tany amin'ny 10 ambany indrindra i Florida, anisan'izany i Hialeah amin'ny toerana farany amin'ny ankapobeny. Jacksonville (No. 45) sy Orlando (No. 58) no hany tanàna Sunshine State roa nandrombaka ny antsasany ambony.
Ao amin'ny sokajy Fahalalahan'ny isam-batan'olona, ​​tanàna Florida maro no nifamatotra tamin'ny toerana farany tamin'ny metrika efatra amin'ny enina ary zara raha afa-nandositra ny toerana farany tamin'ny roa hafa. Tsy tsara kokoa koa ny zava-bitan'izy ireo tao amin'ny Community Generosity. Ny isan'ny trano fialofana no hany metrika amin'ny fitambaran'ny fito izay tsy nahitana laharana faha-10 na filaharana ho an'ny toerana farany ny tanànan'i Florida.
Raha lavo tamin'ny fotoan-tsarotra ianao dia aza mandeha any amin'ny tanàna maro ao amin'ny Sunshine State mitady fanampiana - fa matokia fa hahita trano ny namanao tongotra efatra.